Privy: Ampitomboy ny fivarotanao amin'ny fivarotana an-tserasera miaraka amin'ity sehatra ara-barotra e-varotra feno ity | Martech Zone
Ny fananana sehatra ara-barotra vita tsara sy mandeha ho azy dia singa manan-danja amin'ny tranokala e-varotra rehetra. Misy hetsika 6 tena ilaina izay tsy maintsy apetraka amin'ny tetikady ara-barotra e-varotra momba ny fandefasana hafatra:
Ampitomboy ny lisitrao - Fanampiana fihenam-bidy tongasoa, spin-to-wins, fly-outs, ary fampielezan-kevitra amin'ny fivoahana mba hampitomboana ny lisitry ny lisitrao sy hanomezana tolotra mahasarika dia zava-dehibe amin'ny fampitomboana ny fifandraisanao.
fampielezan-kevitra - Ny fandefasana mailaka tongasoa, ny gazetiboky mitohy, ny tolotra ara-potoana ary ny fandefasana lahatsoratra mba hampiroboroboana ny tolotra sy ny vokatra vaovao dia tena ilaina.
fiovam-pony - Ny fisorohana ny mpitsidika tsy hiala miaraka amin'ny vokatra ao anaty sarety amin'ny fanomezana fihenam-bidy dia fomba tsara hampitomboana ny tahan'ny fiovam-po.
Fandaozana sarety - Ny fampahatsiahivana ny mpitsidika fa manana vokatra ao anaty sarety dia tsy maintsy atao ary, angamba, manana fahombiazana lehibe indrindra amin'ny tetika automation marketing rehetra.
Fanentanana Cross-Sell – Ny fanolorana vokatra mitovitovy amin'izany dia fomba tsara hampitomboana ny sandan'ny sarety ho an'ny mpitsidika anao ary handroaka varotra fanampiny.
Top Bar tolotra - Ny fananana bara fitetezana ambony ao amin'ny tranokalanao izay mampiroborobo ny fivarotana farany, ny tolotra, na ny tolo-kevitry ny vokatra dia mitarika fifamatorana sy fiovam-po.
Customer Winback – Raha vantany vao mividy aminao ny mpanjifa iray dia manana vinavina napetraka izy ireo, ary mora kokoa ny mamerina azy ireo hividy indray. Ny fampahatsiahivana na tolotra nahemotra fotoana dia hitondra fiovam-po.
Fividianana fanaraha-maso - Fanakianana ho an'ny tranokala e-varotra rehetra ny tsikera, noho izany ny fananana mailaka fanaraha-maso izay mangataka famerenana, manolotra vokatra, na milaza fotsiny hoe misaotra dia fomba tsara hitazomana ny mpanjifanao.
Templates – Ny maodely voaporofo izay fantatra fa mitondra fiara misokatra, click-throughs ary fiovam-po dia tsy maintsy atao mba tsy mila mikaroka na mamolavola ny azy manokana ny mpivarotra.
Privy dia manolotra ny tsirairay amin'ireo endri-javatra ireo mba hanomezana sehatra ara-barotra e-varotra feno ho anao Shopify fivarotana.
nahalala no sehatra dinihina indrindra ao amin'ny Shopify App store… misy fivarotana 600,000 mahery mampiasa ny sehatra misy azy ireo! Tsy vitan'ny hoe manana iray amin'ireo sehatra mora indrindra izy ireo, Privy koa dia manana fanangonana loharano an-tserasera be dia be mba hianaranao ny fomba hivarotana tsara kokoa ny fivarotanao an-tserasera.
Na dia tsy misoratra anarana aza ianao dia manoro hevitra anao aho mba hisoratra anarana sy handray ny Privy's Kalandrie fialantsasatra ecommerce. Kalandrie azonao alaina, atao pirinty, ary tehirizina mora foana… misy toerana ho an'ny naoty mihitsy aza. Izy ireo koa dia handefa mailaka anao miaraka amin'ny fampahatsiahivana manentana fanahy sy isam-bolana mba tsy hanadinoanao fety hafa.
Andramo ny Privy maimaim-poana
Fampahafantarana: Mampiasa ny rohy mpampifandray ahy aho nahalala ary Shopify ao amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: fahazoanafandaozana saretyfampielezan-kevitra mivarotanampanjifa winbackfanentanana e-varotramailaka ecommercemodely mailaka ecommercehevitra momba ny ecommerceautomation emailmailaka Marketingmailaka modelymitombo ny fiovam-pofitomboana lisitraonline shoppingfanentanana miantsena an-tseraseranahalalatolo-kevitra momba ny vokatrafividianana fanaraha-masoshopifyShopifyPlusSMSspin-to-winfahazoana ny mpanjifabara ambonybara fitetezana ambony